ကတ်သီးကတ်သတ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (တာရာမင်းဝေ) - Myanmar Network
ကတ်သီးကတ်သတ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (တာရာမင်းဝေ)
Posted by နီတျာ on January 24, 2013 at 20:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ခုတလော အလုပ်ကလည်း ခပ်များများ .. ဆိုတော့ .. Own လည်း မ Tune နိုင်သေးတာမို့ ခုလောလောဆယ် ဖတ်နေတဲ့ တာရာမင်းဝေရေးတဲ့ ကတ်သီးကတ်သတ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက အင်္ဂလိပ်စာ ဗဟုသုတလေးတွေကို တစ်ခြားလူတွေလည်း ဖတ်ရအောင် ... ရိုက်ပြီးတင်ပေးမယ်နော်။
မေး။ ဇာတ်တော်တွေထဲမှာ ပါနေတတ်တဲ့ ခရုသင်း ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ ၊ ခရုသင်းမှုတ်တဲ့ ပညာရပ်ကိုရော ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ခရုသင်းကို ရုပ်ပြစာအုပ်တွေ ရာဇဝင်တွေထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လို .. Conch လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခရုသင်းမှုတ်တဲ့ပညာရပ်ကတော့ အင်္ဂလိပ် အသုံးအနှုန်းမှာ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး .. ခရုခွံတို့ ယောက်သွားတို့လို အခွံမာတွေအပေါ်လေ့လာတဲ့ ပညာရပ်တော့ရှိတယ်။ Conchology လို့ခေါ်တယ်။ ခင်ဗျားက ဘာကိစ္စ ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတာတုန်း .. သူများအရေပြားပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ခရုသင်းကိုတော့ သွားမမှုတ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။
မေး။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ အလွန်နားယဉ်နေတဲ့ သိကြားမင်း ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ.။ ပြီးတော့ နတ်သုဒ္ဓါကိုရော ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ သိကြားမင်းကို Indra လို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။ နတ်သုဒ္ဓါကိုတော့ Nectar လို့ခေါ်ပါတယ်။ Ambrosia လို့လည်း သုံးနှုန်းလေ့ရှိပါတယ်။ သူကတော့ မက်မုန်သီးတစ်မျိုးကိုခေါ်တဲ့ နာမည်ပေါ့။
မေး။ စာခြောက်ရုပ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ .. ပြီးတော့ လောက်စာလုံးကိုရော ဘယ်လိုသုံးနှုန်းပါသလဲ။
ဖြေ။ စာခြောက်ရုပ်ကို Scarecrow လို့ခေါ်ပါတယ် .. လောက်စာလုံး ကိုတော့ pellet လို့ခေါ်ပါတယ်။
မေး။ စက္ကူပန်းကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
ဖြေ။ Paper Flower တော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ Bougainvillea ခေါ်ပါတယ်။
မေး။ ဘီလူးနဲ့ ဂဠုန်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ဘီလူးကို Ogre လို့ခေါ်ပါတယ် .. အိုဂါးလို့ အသံထွက်ပါတယ် (အိုပါးနှင့် မမှားစေလိုပါ) ။ ဘီလူးမကို တော့ အိုနီး .. အဲလေ Ogress အိုဂရတ်စ် လို့ခေါ်ပါသတဲ့။ ဂဠုန်ကတော့ Garuda, Garudha, Gruna စသည်ဖြင့် ကြိုက်ရာရေးနိုင်ပါသတဲ့။
မေး။ ကျို့ထိုးတာနဲ့ လေချဉ်တက်တာကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ကျို့ထိုးတာကို ... Hiccup လို့ခေါ်ပြီး .. လေချဉ်တက်တာကို Belch လို့ခေါ်သတဲ့။ လေလည်တာကိုတော့ .. Fart လို့ခေါ်ပြီး Break wind လို့လည်းခေါ်သေးသတဲ့။
မေး။ အနိစ္စနဲ့ ဥပေက္ခာကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
ဖြေ။ အနိစ္စကို Impermanence လို့ခေါ်ပြီး ဥပက္ခာကိုတော့ Detachment သို့မဟုတ် Aloof လို့လည်းသုံးနှုန်းပါသတဲ့။
မေး။ အော်ဂလီဆန်တာ နဲ့ မခံချိ မခံသာ အသည်းယားတာကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ အော်ဂလီဆန်တာကို Reich လို့ခေါ်တယ် (ပျို့တက်တယ် .. အန်ချင်တယ်ပေါ့လေ)။ လက်ယားတာ အသည်းယားတာ မခံချိမခံသာ ကျလိကျလိ ဖြစ်တာတွေကို တော့ Nettle လို့သုံးပါတယ်။
မေး။ ကွမ်းယာမှာ ထည့်စားတဲ့ .. ကွမ်းသီး၊ လေးညှင်းပွင့်၊ နွယ်ချို၊ စမုံစပါး စတာတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
ဖြေ။ ကွမ်းသီးကို Areca ၊ လေးညှင်းပွင့်ကို Clove၊ နွယ်ချိုကို Liquorice ၊ စမုံစပါးကို Dill Seed လို့ခေါ်ပါတယ်။
မေး။ လူ့ခွစာ နဲ့ သူငယ်ပြန် တာကို အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ လူ့ခွာစာကို Codger လို့ခေါ်ပြီး သူငယ်ပြန်တာကို Dotard လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲ... နောက်နေ့မှ ဆက်တင်ပေးမယ်နော် .. စာအုပ်လိုက် ပုံလေးတွေနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်ချင်ရင် ဒီလင့်ခ်ကနေ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ..
130 members like this
Permalink Reply by mgkothu on January 26, 2013 at 16:28
Permalink Reply by Byal.La70 on January 27, 2013 at 2:07
http://www.mediafire.com/?xh218dej3m4vmz6 တာရာမင်းဝေရဲ့ ကတ်သီးကတ်သတ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ စာအုပ်ပါ... ကျွန်နော် ရှာတာ တွေ့လို့ လင့် ကို ပြန်မျှလိုက်ပါတယ်. အဆင်ပြေကြပါစေ.
Permalink Reply by Sophia Linn on January 27, 2013 at 10:28
Permalink Reply by khin myo swe on January 27, 2013 at 17:09
Permalink Reply by Su Su Win Hlaing on February 1, 2013 at 22:24
Permalink Reply by shuwan on February 2, 2013 at 23:15
Permalink Reply by Crazy.man on February 10, 2013 at 8:41
really useful............thz for share
Permalink Reply by miss.moe on March 20, 2013 at 23:12
Permalink Reply by myayadanar on January 13, 2014 at 10:30
Permalink Reply by Khine Zar Lwin on January 13, 2014 at 17:19
It's hard to find english translations of such words!Thank you for your post :)
Permalink Reply by Learner on January 14, 2014 at 8:38
ကျေးဇူး သူငယ်ချင်း...What you share can give both pleasure and knowledge, thanksalot.
Permalink Reply by Amy Chan on May 30, 2015 at 10:48